Iintlanzi zophondo lweentyatyambo | Ngeentlanzi
El Iintlanzi zophondo lweentyatyambo, yintlanzi engaphakathi kohlobo lweCichlasoma, eyinzalelwane yelizwekazi lase Mzantsi Melika nesibe sisiphumo somnqamlezo phakathi kwemizekelo ebikhethwe ngaphambili.
Ngeli xesha, olu hlobo lusefashonini kakhulu e-Asiya, kuba ngokwemiqondiso ye Feng Shui yintlanzi etsala ithamsanqa kunye nempumelelo. Isifuba esifunyenwe ebunzini lakhe sinxulunyaniswa nebunzi elinalo Isithixo saseTshayina sobomi obude, ngelixa amanye amalungu omzimba wakhe ethathwa njengezidalwa ezivela kuThixo. Impikiswano esetyenziswe ngaba bantu bayayinxulumanisa ne-feng shui, kukuba inkulu i-hump okanye i-bump entlokweni yabo, impumelelo ngakumbi, ithamsanqa kunye nokuphila ixesha elide umntu onale ntlanzi uya kuba nayo.
Uphondo lweentyatyambo lungakhula lube ziisentimitha ezingama-30 kwaye lungaphila phakathi kweminyaka eli-10 ukuya kweli-12 ubudala ukuba lukwisimo esifanelekileyo. Ngokubanzi, ezi ntlanzi zitya iintshulube, ezinye iintlanzi ezincinci, iintshulube zomhlaba, i-shrimp kunye nenyama egayiweyo. Inokutyiswa ispinatshi, iletisi, kunye nee-ertyisi.
Nangona inokuba ndlongondlongo ekuqaleni, inokwenza ubudlelwane obomeleleyo nobunzulu kunye nabanini bayo. Ndicebisa ukuba ufuna ukuba nale ntlanzi kwi-aquarium yakho, gcinani engqondweni ukuba yindawo enkulu kakhulu.
Ukuba sifuna ukuba nolunye uphondo lwentyatyambo kwi-aquarium efanayo, kuyacetyiswa ukuba sigcine sahlukile ekuqaleni, kodwa sisondele ukuze ubuso babo bubonakale, kwaye kancinci kancinci, ngokuhamba kwexesha, zama ukuzixuba kunye nokuzama ukubona ukuba bayavana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Iintlanzi zophondo lweentyatyambo